Ụfọdụ nsụgharị nnwale
10% kwụsịrị Xmas Promotional (Ọ dabara Dec 14 - Jan 15)
Iji kwụọ ụgwọ nkwado nke ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi, ụlọ ọrụ anyị ga-amalite mmemme mbelata ekeresimesi otu ọnwa taa, a ga-ebelata ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ anyị na 10%. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko kpọtụrụ m. Ka anyị webata onye ọ bụla ngwaahịa anyị dị ọcha nkenke.Our ...
Ihe mkpuchi mmiri SAP
site admin na 21-12-08
Emepụtara polymers nke ukwuu na ngwụcha afọ 1960. Na 1961, Northern Research Institute of US Department of Agriculture anyadokwa starch na acrylonitrile maka oge mbụ iji mee HSPAN starch acrylonitrile graft copolymer nke karịrị ihe ọdịnala na-amị mmiri. Na...
Okwu Mbụ—Super Absorbent Polymer
Ka m webata SAP nke ị nwere mmasị na nso nso a! Super Absorbent Polymer (SAP) bụ ụdị ihe ọhụrụ polymer na-arụ ọrụ. Ọ nwere ọrụ mmịpụta mmiri dị elu nke na-amịkọrọ mmiri ọtụtụ narị ruo ọtụtụ puku ugboro dị arọ karịa onwe ya, ma nwee njigide mmiri dị mma ...
Onye na-ahụ maka ọgwụgwọ mmiri dị ọcha nke Cleanwat Polymer
Nyocha gbasara ike itinye n'ọrụ na ọgwụgwọ mmiri mkpofu ụlọ ọrụ 1. Isi mmalite mmetọ mmetọ ọla dị arọ na-ezo aka na mmetọ gburugburu ebe obibi nke ọla dị arọ ma ọ bụ ogige ha kpatara. Ihe kpatara ya bụ ihe mmadụ na-akpata dị ka ngwuputa ihe, mkpofu gas, ịgba mmiri mmiri na iji oke...
N'ime ọgwụgwọ mmiri mkpofu nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ibipụta na ịcha mmiri bụ otu n'ime mmiri mkpofu kacha sie ike ịgwọ. Ọ nwere ihe mgbagwoju anya, uru chroma dị elu, nnukwu ntinye uche, ọ na-esikwa ike imebi. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha njọ na nke siri ike ịgwọ mmiri mkpofu ụlọ ọrụ ...
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ nkwalite Septemba wee wepụta ihe omume ndị a na-ahọrọ: Water Decoloring Agent na PAM nwere ike zụta ọnụ na nnukwu ego. E nwere isi ihe abụọ na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ anyị. Water Decoloring Agent CW-08 bụ tumadi eji t ...